စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 6:18 AM
အော် .. ဒုက္ခ ၊ ဒုက္ခ ။
ရီဝေည ဆိုတော့..ကိုဏီးတို့ ဘီယာများမူးနေသလားလို့...
သူနဲ့သူမနဲ့ အခုလက်ရှိအခြေအနေက ဘယ်လိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
သူမကို ယခုချိန်ထိ သတိတရ
သူများ ဆားချက်လို့ လိုက်ချက်ထားတာလား
အလကားစတာ ကိုဏီရေ မဖတ်ဘူးသေးဘူး သနားစရာလေးဘဲ
ဟွန်း. . ဟွန်း . .မပြောချင်ဘူး။
ခုတလော ရှောက်သီးဆေးပြား မရောင်းပဲ မူးရစ် ရီဝေ နေတာပေါ့လေ။
ပြောစမ်ဘာ. . ပြောလိုက်စမ်းဘာ. .
သိပီ. .သိပီ. . .အခန်းဘေးနားက ရိုတီ ရောင်းတဲ့ ကုလားမကြီးကို စောင်းရေးထားတာ မလား။
သိဘာဒယ်. . . သိလိုက်ဘာဒယ်နော်။
အဲဒီလိုဖြစ်ရပ်ကလေးတွေ ရှိခဲ့ ဘူးတယ်ကိုဏီရေ....
ဘာလို့ များမပွင့်လင်းခဲ့ ကြပါလိမ့်ဗျာ
တကယ်ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးရပြီဆိုမှ ခံစားရတဲ့ အတိုင်းအတာက
ဏီဏီရေ.... အဆင်ပြေပါစေ သငယ်ချင်း....း)
တကယ်တော့ဗျာ နှလုံးသားဆိုတာကြီးက ရင်ဘက်ထဲရှိမနေပဲ လူတွေထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာရှိရင် ပိုများကောင်းမလားပဲ တစ်ယေက်အချစ်ကို တစ်ယောက်မြင်နိုင်ပြီး နားလည်မှုတွေ တုန့်ဆိုင်းတုန့်ဆိုင်းနဲ့ ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့..
ဒုတိယအကြိမ် ခံစားသွားတယ် ကိုဏီရေ...
စိတ်ကူးကော.. ပုံဖော်တာကော ကြိုက်တယ်အစ်ကို။ ဖတ်လည်း မဖတ်ရသေးပါဘူး.. (ဒီလိုဆားချက်တာတော့ ခွင့်လွတ်ပါတယ် :))
ဒီလိုဝတ္ထုတိုလေးက ၀ါကျရှည်တွေ သုံးတော့ ပိုပြီး ပျော့သွားတာပေါ့။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အရေးအသားစတိုင်လိုက်တယ်အစ်ကို။ တစ်နေရာလေးပဲ နဲနဲဖတ်ရထောက်သွားတယ်။ (ခြံအပြင်ဘက်မှနေပြီး ဘေး တိုက်အနေအထားမှ “သူ”လှမ်းငေးနေမိခဲ့တဲ့ “သူမ”တို့ရဲ့ တစ်ထပ်အိမ်ပုပုလေးကတော့ မိုးချုပ် ညနက်ရီရီမှာ ငြိမ်သက်စွာ တိတ်ဆိတ်လျက် တစ်အိမ်လုံး မည်းမှောင်လျက်ရှိသော်လည်း အိမ်ရဲ့အရှေ့ ဆင်ဝင်အောက်မှာတော့ အပြာနုရောင် မီးပွင့်ငယ်ငယ်လေးတစ်ပွင့် မှုန်ဖျဖျလင်းနေခဲ့တာတွေ့ရ၏။) အဲဒါလေးပဲ။ ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်ရထောက်သွားတာလေးပြောပါတယ်။
၀တ္ထုသက်သက်ဆိုရင်တော့ ဘာမှမပြောတော့ဘူး :) ကိုကြီးရင်တွင်းဖြစ်ဆိုရင်တော့ :) မြန်မြန်ဖွင့်ပြောလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ သိပ်တွေးတဲ့လူဟာ အမြဲနောက်ကျတယ်အစ်ကို(ကိုယ်တွေ့) ဒါပေမယ့် ဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။ နောက်ကျပေမယ့် အကျိုးမယုတ်ပါဘူး(အဲဒါလည်း ကိုယ်တွေ့ပဲ)..။
အစ်ကိုရေ အပေါ်ကဟာက ကျွန်တော်ရေးတာ..။ ဝေလင်း
ဘာတွေ အလုပ်ရှုပ်နေလဲ ကိုဏီး..
ဝထ္တုတိုတည်ဆောက်ပုံလေးကိုသဘောကျတယ်... စိတ်ကူးလေးကောင်းတယ်.... ဇာတ်ကောင်တွေကိုသဘောမကျဘူး... လက်တွေ့မဆန်တာမကြိုက်ဘူး
ပွင့်လင်းလိုက်ကြပါတော့လားဟယ်...ငါနဲ့များ နေရာချင်း လဲလိုက်ချင်တယ်...ဟင်း ဟင်း ဟင်း !! (မချိတင်ကဲလေသံနှင့် ပြောသွား...)
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဖွင့်မပြောလိုက်တာ မပြောမိတာတွေက ပိုကောင်းပါတယ်၊ အခြေအနေအရပေါ့၊
အော်...ငါ့အစ်ကိုဂျီး ပျောက်နေတာ ဆွေးသောကမီး ဖိစီးနေရှာလို့ကိုးးးးးးးး
(ဖတ်ဖူးပါတယ်...မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးပါဆိုလို့ တိတ်တိတ်လေးပဲ ပြန်သွားတယ် ဘာတစ်လုံးဆို တစ်လုံးမှ ရေးမသွားဘူးနော် :)))
ကောင်းလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ကိုဏီး...း))... မတွေ့တာကြာပြီနော်....
ဆားပဲချက်ချက် ငပိပဲချက်ချက် လာရောက်အားပေးသွားပါကြောင်းး
ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ဖတ်သွားတယ်။ တစ်ယောက်သော ကျွန်မသူငယ်ချင်းကို သတိရသွားတယ်။ အကြာကြီးပျောက်မသွားနဲ့နော်... စာအသစ်လေးတွေ ဖတ်ဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင်။
မဖတ်ဖူးသေး ပါ ဘူးးး ကွယ် ....
အားပေးသွားတယ် ဗျို့ ....
ရီဝေေ၀ ဖြစ်တာတော့ ညတိုင်းပဲ.. :P
ဏီလင်းရေ အမလည်းရီဝေဝေနဲ့ဖတ်ပြီးပြန်သွားတယ် :)
အင်းလေ...မချစ်ပြောသလိုပဲ...ဏီဏီကလဲ ဖွင့်ပစ်လိုက် ဖွင့်ပစ်လိုက် ကျိတ်မထားနဲ့...ခံစားချက်ကိုပြောပါတယ်...။ နေကောင်းတယ်ဟုတ် ပျောက်နေတာကြာလို့...။ ဆားချက်ထားတာ ငံနေတုန်းပဲ...။
ဪ.. အုံ့ ပုန်း သီးတွေ ပါ လား.. ရှင်းရှင်းပြောလိုက် ပြီးနေတာ ပဲ .. ဟာ ပဲ ...ဟာပဲ .. ခုတော့ ဘယ့်နှယ် ရှိ စ ..ဟင်း ဟင်း..
အစ်ကိုရေ ၀တ္ထုတိုလေး ဖတ်ပြီး ဆွေးသွားတယ် ...
အစ်ကို ဘာဖြစ်နေလဲဟင် ...
ကျွန်တော့်ကို အားကျပြီး အသည်းကွဲနေလား ...
ဒါမှမဟုတ် ရန်ဖြစ်ရမယ့်သူ မရှိလို့ လွမ်းနေလား ...
အဲလို ရီဝေတဲ့ ညတွေ ... ကျွန်တော်တို့ အနားက ပြေးထွက်သွားကြပါစေတော့ဗျာ ...
မခံနိုင်တော့ဘူး ... အဟင့်ဟင့် ...
ငယ်ငယ်ကဆို အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေ ဖတ်ရင် အသဲယားရော ဖွင့်ပြောလိုက်ရင် ပြီးရောဟာကို ဆိုပြီး အားမလို အားမရ ဖြစ်တာလေ။ နောက်တော့လည်း ဇာတ်လမ်းရဲ့ သဘောသဘာဝ ကို သိလာတော့ တငြိမ့်ငြိမ့်ပေးတဲ့ရသ ကိုပဲ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိ တော့တယ်။
ပျောက်နေလားလို့ မှတ်နေတာ သူလဲ ရီဝေေ၀ ဖြစ်နေတာကိုး ...
သယ်ရင်းရေ လင်းတော့ နေကောင်းသွားပြီ ...
သယ်ရင်းလဲ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ... နော ..
သက္ကရာဇ်တွေ နောက်ပြန်ရွှေ့လို့ ဖတ်ရှုခံစားသွားပါကြောင်း...။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ " ဝေးသွားတဲ့အခါ " သီချင်းလေးနဲ့တွဲတင်ရမှာ..။
အဟွတ်... သိပ်မပြောချင်တော့ဘူး။ ဒီလူကြီးကို... ရီဝေဝေဖြစ်နေတယ် ဆိုကတည်းက အဟဲ... ရိပ်မိနေတယ်။ အလဲ့...
ဒီကိုလာပါလား (ဦးတည်တို့နဲ့သာ အဖွဲ့ကျကြည့် အချိန်ပြည့် ရီဝေနေလိမ့်မည်) ဟဟားးးးး
ကိုဏီရေ... ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ သတိရပါသည်။ ညီသေးသေးကို သီချင်းဆိုပြပြီး၊ ညီမသေးသေးလေးကို သီချင်းဆိုမပြ၍ ကွေးပါသည်။ မှတ်ထားတယ်နော်။ မှတ်ထားတယ်။ :P